ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ရဲဘော်ဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းများ သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၂၂ – ၁၀ -၂၀၀၃) | Communist Party of Burma
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ရဲဘော်ဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းများ သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၂၂ – ၁၀ -၂၀၀၃)
By admin | October 22, 2003
ဖဆပလ နှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့၏ အပြန်အလှန်ပေးစာများ
သခင်တင်မြ သို့ အကြံပြုချက် ( ၁၂ – ၁၀ – ၂၀၀၉ )
သခင်တင်မြ သို့ ပေးတဲ့ (စာတို)
၃ ထပ်ကွမ်း သစ္စာဖောက်များသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ( ၁၇ – ၃ – ၂၀၀၉ )
← ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်းရှိ BIA. BDA. PBF တပ်မတော်သားဟောင်းများက အငြိမ်းစားနှင့်ထမ်းဆောင်ဆဲ တပ်မတော်သားများသို့ တင်ပြချက် (၁၅ – ၁၀ – ၂၀၀၃) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ) →